उद्योगीलाई महामारीमा सरकारले बेवास्ता गर्‍यो (अन्तर्वार्ता):: Naya Nepal
उद्योग जुनसुकै भए पनि ‘ब्याकवार्ड र फरवार्ड लिंकेज’ त्यसको चक्र घुम्नुपर्छ। यो चक्र भनेको कच्चा पदार्थ पाउनेदेखि तयारी वस्तु उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने सम्मको हो। यो चक्र टुट्न हुँदैन। तर पहिलो लकडाउनमा यो कायम भएन।
भनेपछि सरकारको काममा ‘अर्जेन्सी’ देखिएन?
मौद्रिक नीति आएको दुई महिना भयो, अहिलेसम्म निवेदन लिने काम मात्र भइरहेको छ। निर्देशिका बनाउनै नै त्यत्रो समय लाग्यो। ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ शून्य बराबर नै भयो।
यो अवस्थामा आउँदा हाम्रो उद्योग क्षेत्रमा नवीन सोच आउने, उत्पादन ‘डाइनामिक्स’ फेरिने सम्भावना कस्तो देखिन्छ?
हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्र कोरोनाअघि सुस्त गतिमै थियो। कहिले पनि ‘मेनस्ट्रिम’ भएको थिएन। हामी खासमा ‘डिइन्डस्ट्रिलाइजेसन’ को बाटोमा थियौं। उत्पादनमूलक उद्योगको सम्भावना कति थियो कति थिएन भन्ने अर्कै पाटो होला। अहिलेको महामारी समयमा सरकारले उद्धार गरेन र अवस्था यस्तै रह्यो भने कसरी अगाडि जान्छ होला?